Kuzokwethulwa uhlelo lokuzivocavoca | News24
LAST UPDATED: 2019-04-18, 20:16
Kuzokwethulwa uhlelo lokuzivocavoca
KUZOKWETHULWA ngokusemthethweni uhlelo lokuzivocavoca endaweni yase-Ashdown ngoMgqibelo mhla zingama-30 kuMbasa (March) ezinkundleni zemidlalo yakuyona lendawo ngehora leshumi ekuseni (10am).
Lolu hlelo lwama-aerobics lwethiwe ngokuthi iZilolonge aerobics Centre.
Ngokusho komunye wabasunguli balo uNks Nonjabulo Nxumalo uthe bayaqala ukuthi babe nohlelo olufana nalolu endaweni kanti inhloso yalo ukukhuthaza ukubaluleka kokuzivocavoca nokuhlala uphilile ngaso sonke isikhathi.
“Kunabantu abaningi abathandayo ukuba babe ingxenye yezindawo zokuzivicavoca kodwa uthole ukuthi abanayo imali yokugibela baye kuzona ngoba ayikho endaweni. Lokhu kuzosiza kakhulu umphakathi wethu ukuthi uhlale uphilile ngaphandle kokuthi uhambe uze ukhiphe imali ngoba uthi ufuna ukuzivocavoca. Into emnandi kakhulu futhi ukuthi uma ngabe ufuna ukuba ingxenye yalolu hlelo akudingeki ukhokhe lutho ngoba kumahhala,” kubeka yena.
Uthe ngaphambi kokuba kwethulwe lolu hlelo kuzoqala kube khona i-fun run yebanga lika-5km nemahhala ukuyijoyina.
Ngeminye imininingwane mayelana nalomcimbi okanye ukujoyina leli qembu lokuzivocavoca xhumana noNonjabulo enombolweni ethi : 079 258 4979 noma uNombuso : 061 468 5470.
Paarl 19:33 PM